Polyolefin အပူကျုံ့ပြွန်တရုတ်ကာကွယ်ရေးလက်ပေးသွင်းသူ - လက်ကားရောင်းသူနှင့်လျှော့စျေးသီးသန့်အင်္ကျီလက် - Dongguan Dabeini Electronics Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > insulator တွင်လည်းလက် > အပူကျုံ့ပြွန် > Polyolefin အပူကျုံ့ပြွန်
Polyolefin နှစ်ထပ်နံရံအပူကျုံ့ပြွန်သည်အထူး polyolefin ပစ္စည်းအပူကျုံ့ပြွန်။ ၎င်းကို polyolefin-based halogen-free flame-retardant ပစ္စည်းများနှင့် hot-melt ကော်နှစ်ခုအလွှာပူးတွဲထုတ်ယူခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ အပြင်ဘက်အလွှာကို polyolefin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူနှင့်အနိမ့်ကျသောအပူချိန်ကိုကျဆင်းစေခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းအလွှာတွင်အပူအရည်ပျော်ကော်သည်အရည်ပျော်မှုနိမ့်ခြင်း၊ စွဲကပ်မှုကောင်းခြင်း၊ ရေစိုခံတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်စက်မှုဇုန်တင်းမာမှုကြားခံ၏အားသာချက်များရှိသည်။ အပူကျုံ့ပြွန်သည်အပူချိန်ကျုံ့မှုနှင့်ပျော့ပျောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ လောင်ကျွမ်းခြင်း, insulation နှင့်ချေးကာကွယ်မှု၏အားသာချက်များ။
ချိုးမှာ elongation after aging
ASTM D2671(225â "ƒ / 4(ဇ)
ASTM D2671(-5)5â "/ 4(ဇ)
AC2500V / 60S (No breakdow)
¥‰ 1011Î© .cm
ASTM D2671(၁၅၈℃/ 168(ဇ)
1. ကျုံ့အချိုး 2: 1, 3: 1 4: 1 ဖြစ်ပါတယ်
2. ကျုံ့အပူချိန် - ကန ဦး ၇၀ ƒအနည်းဆုံးအပြည့်အဝကျုံ့ ၁၂၅ ƒ
၃။ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် - -45 ° C + 125 ƒ
4. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 1.2mmï½ž50.8mm
5. အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: RoHS, ul ။
6. S.ရာဝတီ color: black (other colors can be provided according to customer requirements)
၇။ ကိရိယာများ - မီးဖိုနှင့်အပူပေးလေလေသေနတ်နှင့်ကျုံ့ပါ။ polyolefin heat-shrinkable tube ၏နောက်ဆုံးကျုံ့ထားသည့်အပူချိန်သည်အပူစွမ်းအင်ကိုကျုံ့စေသည့်ပြွန်သည်နောက်ဆုံးတွင်ကျုံ့သည့်အပူချိန်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် polyolefin heat-shrinkable tube ၏လုံး ၀ ကျုံ့မှု၏အပူချိန်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏ polyolefin double-wall ကဲ့သို့သော အပူ - ကျုံ့ပြွန် 84 ° C မှအပူဖြစ်ပါတယ်။ နွားမွှေးရွတ်နဲ့မတူဘူး ငါကဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့အထိကိုင်ထားဖို့လိုတယ်။ cowhide ရွတ်ကလုံးဝပြန်ထွက်လာပြီးငါလွှတ်လိုက်တာနဲ့မူလအခြေအနေကိုပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပူပေးသောပြွန်သည်ဤသို့မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုအပူချိန် ၈၄ ဒီဂရီအထိရောက်သောအခါ၎င်းသည် cowhide ရွတ်များကဲ့သို့သောမူလပုံသဏ္immediatelyာန်ကိုချက်ချင်းပြန်ပြောင်းသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ polyolefin အပူ - ကျုံ့ပြွန်၏ကျုံ့တဖြည်းဖြည်းဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် polyolefin heat-shrinkable tube ကို ၈၄ ံအပူပေးသောအခါ၎င်းသည်ကျုံ့မှုကိုပြရုံသာမက polyolefin heat-shrinkable tube ကိုလုံးဝကျုံ့။ မရပါ။ နောက်ဆုံးအပူချိန်ကိုအပူပေးပြီးဆက်လက်အပူပေးရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် ၁၂၅ is ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်လုံးဝကျုံ့သွားနိုင်သည်။ ကျုံ့။
Polyolefin အပူ - ကျုံ့ပြွန်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမီးတောက်နှင့်လျှပ်ကာသတ္တိရှိပြီးအလွန်ပျော့ပျောင်းသော elastic ဖြစ်သည်။ အပူချိန်နိမ့်ကျ။ လျင်မြန်စွာကျုံ့သည်။ ၎င်းကိုဝါယာကြိုးဆက်သွယ်မှု၊ ဝါယာကြိုးအဆုံးကုသမှု၊ ဂဟေဆက်ကာကွယ်မှု၊ ဝါယာကြိုးကြိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ခုခံနိုင်စွမ်းနှင့် capacitance insulator တွင်လည်းကာကွယ်ခြင်း၊ သတ္တုချောင်းများသို့မဟုတ်ပိုက်များ၏ချေးခြင်းကာကွယ်ခြင်း၊ အဆိုပါ linear ပေါ်လီမာပစ္စည်းသုံးရှုထောင်ကွန်ယက်ကို Cross- ဆက်နွယ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပေါ်လာသော။ ဓာတုအရည်ပျော်ပစ္စည်းခုခံနိုင်မှုနှင့်အိုမင်းခြင်းခံနိုင်ရည်အထူးသဖြင့်အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်တို့တွင်စက်မှုအင်အား၊ အပူ၊
polyolefin နှစ်ထပ်နံရံအပူကျုံ့ပြွန်၏ parameters:
S.ရာဝတီ size (mm)
ကျုံ့ပြီးနောက် mm အထူ (mm)
ဆန် / လိပ်
၃.၂ / ၁.၆
၄.၈ / ၂.၄
၆.၄ / ၃.၂
၉.၅ / ၄.၈
၁၉.၁ / ၉.၅
၄.၈ / ၁.၆
30,0 / 10.0
• S.ရာဝတီ color: black (-BK)
• Non-s.ရာဝတီ colors: white (-WH), red (-RD), yellow (YL), blue (-BL), green (-GR), transparent (-CL, non-flame retardant)
• Non-s.ရာဝတီ size: non-s.ရာဝတီ size products can be provided upon request
â€ instructions မှာယူခြင်းညွှန်ကြားချက်: ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်, သတ်မှတ်ချက်, အရောင်ကိုသတ်မှတ်
â€ the ဇယားရှိရလဒ်များသည်ဤမော်ဒယ်ထုတ်ကုန်၏ပုံမှန်ဒေတာများဖြစ်ပြီးထုတ်ကုန်တစ်ခုစီသည်အချို့သောသွေဖည်မှုများရှိလိမ့်မည်။
အဓိကအားဖြင့် SGS ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်သည့်မီးလျှံတားဆီးမှုအဆင့်သည် UL94-V0 ဖြစ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်မီးလျှံတားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလေလေပြည်ပသို့တင်ပို့မှုပိုအဆင်ပြေလေလေဖြစ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုမိတ်ဆက် - ဆားကစ်ဘုတ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း -
ကြိုတင်ရောင်းအား - Pre-sales will actively communicate with customers detailed information, customer needs, product parameters, quality s.ရာဝတီs, provide consultation, accept telephone orders and mail orders, provideavariety of convenience and financial services, etc.
Hot Tags: အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးလက်, တရုတ်, Polyolefin အပူကျုံ့ပြွန်ထုတ်လုပ်သူ, လက္ကား, ဝယ်, စျေးနှုန်း, အမြောက်အများ, လျှော့စျေး, quotation အ။
ဆီလီကွန်ဗဓေလသစ် Fiberglass လက်